Madheshvani : The voice of Madhesh - संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने जसपाको संकेत
संविधान संशोधनको विषयमा मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले संशोधनको पक्षमा उभिने संकेत गरेका हुन् ।
सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रियताको विषय आन्तरिक र बाह्य हुने भएकाले राष्ट्रिय स्वाधिनता र भूअखण्डताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी नहुने स्पष्ट गरे । सरकारको तर्फबाट आएको संविधान संशोधनको समर्थन गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको सिरानबाट बगेको नदी नै कालीनदी भएको उल्लेख गरे ।
यस्तै सांसद कर्णले राष्ट्रियताको विषयमा शंका गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रियताको विषय र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा होच्याउने कार्य नगर्न आग्रह गरे । कर्णले आफूहरुको राष्ट्रियताको विषयमा आफुहरुमाथि शंका नगर्न पनि आग्रह गरे ।
उनले नक्साको विषय कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिदै महाकाली सन्धी र सन् १९५० को सन्धीको विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो राष्ट्रियतामा शंका नगर्न अनुरोध गर्दछु । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रति हाम्रो दुईमत छैन’, सांसद कर्णले भने ।
उनले आफूले पटक पटक भन्दै आए पनि आफूहरुमाथि शंका हुँदै आएको गुनासो गरे । उनले आफू असली राष्ट्रवादी र अरु होइनने भन्ने खालको कुरा नगर्न आग्रह समेत गरे ।
‘हामी पटक–पटक भनिरहेका छौँ । आज मैले सुन्दा जुन अर्नगल कुरा सरकारपक्षबाट आएको छ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ? यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस किमिका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ अरु होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस् मेरो अनुरोध छ ।’
उनले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव बनाउँदा भू–भागसंग सम्बन्धित विषय भएकाले संविधानको धारा ४ को (क) र (ख) लाईपनि हेर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सुगौली सन्धि भएकै हो । हार वा जीतको कुरा गर्ने होइन । समय सापेक्ष सुगौली सन्धि भएको हो । त्यसपछि देशले महाकाली सन्धि गरेको छ, उनले भने, ‘कस्ले कस्ले गरेको हो? आत्मालाई साँझी राखेर आज सोचोस् । यो इतिहासको कालघडीमा के के गर्नुभयो? राष्ट्रवाद त्यो हो? कस्ले भूमि गुमाए?’
भूमि फिर्ता गर्नका लागि सरकारबाट राम्रो कामको सुरुवात भएको भन्दै अझ विशेष गम्भीर रुपले चिन्तन गरेर कुटनीक माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न सुझाब दिए ।